HomeလောကASIA မှ86 တရုတ်တစ်နာရီကိုတရုတ်နိုင်ငံ၏ 1000 ကီလိုမီတာ 2020 အတွက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်တဲ့မြန်နှုန်း Maglev ရထားရောက်ရှိ
တစ်နာရီကိုတရုတ်နိုင်ငံ၏ 1000 ကီလိုမီတာ 2020 အတွက်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်တဲ့မြန်နှုန်း Maglev ရထားရောက်ရှိ
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 86 တရုတ်, ASIA မှ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း 0
တရုတ်ယနေ့မကြာသေးမီလများတွင်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားရှေ့ပြေးပုံစံ၏အတော်လေးဟာပြန့်ပွား Maglev ရထားများအတွက်မိတ်ဆက်မလြော့စစ်ဆင်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်စောစော xnumx'n တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။
မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်မြန်နှုန်းအထိအစဉ်အမြဲစွဲလမ်းတရုတ်, တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအချက်မှာနိုင်ငံပြီးသားသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်၏အဆင့်တွင်သံလိုက် levitation ရထားလမ်းကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုခြင်း၏အလားအလာများအတွက်ပြင်ဆင်နေ, အိမျကနေကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးရထားအချို့ကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းပြည်နယ်ရှိနောက်နှစ်၏ရှေ့ဦးစွာ မှစ. မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု Maglev ရထားလမ်း၏နေရာချထားပြောပါတယ်ကြောင်းလတ်တလောအစီရင်ခံစာ။ အစီရင်ခံစာ၏အဆိုအရအာဏာပိုင်များသည်လက်ရှိတွင်စီမံကိန်းစတင်ရန်တစ်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုပို့ချလျက်ရှိသည်။
အရာအားလုံး 600 ကီလိုမီတာဖို့နာရီ 1.000 ကီလိုမီတာအကြားမြန်နှုန်း၌ပြစ်မှားမိကွမ်ကျိုး၏တရုတ်မြို့ကနေဘေဂျင်းအထိခရီး, အစီအစဉ်အတိုင်းသွားလျှင်, များထံမှ 350 km / h ၏လက်ရှိ High-Speed ​​ကိုရထားကအများကြီးပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လိမ့်မည်ကိုဆိုလိုတာ။ ထို့အပြင်အာရှ Times ကပိုဖွင့်အဘယျသို့ကွမ်ကျိုး 2.200 ကီလိုမီတာမှဝူဟန်ကနေခရီးထွက်နှစျနာရီခနျ့လျှော့ချနိုင်ပါတယ်ဟုသူကဆိုသည်။
တစ်ဦး Airbag Maglev ရထားကျော်သံလိုက်စက်ကွင်းအားလုံးသည်စွမ်းအင်သည်ပွတ်တိုက်မှုနီးပါးသုညလျှော့ချခြင်းနှင့်ယခင်ကမမွငျရသောကြောင်းဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တရုတ် Maglev ရထားအတွက် operating နာရီအများဆုံးမြန်နှုန်းနှုန်း 430 ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။ သို့သော်နည်းပညာတစ်နာရီလျှင် 600 1.000 ကီလိုမီတာအထိ၏ဤမြန်နှုန်းသက်တမ်းတိုးရမည်ခန့်မှန်းထားသည်။
တရုတ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် Maglev ရထားစိတ်ဝင်စားတစ်ခုတည်းသောတိုင်းပြည်မဟုတ်ပါဘူး, ဂျပန်ပြီးသားသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Maglev ရထားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်လူသိများခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာသေးမီစွပ်စွဲချက်, ဂျာမနီနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်း Maglev ရထားသူတို့ရဲ့ဗားရှင်းအလုပ်လုပ်နေကြသည်ဟုဆိုသည်။ (Webtekno)
တစ်နာရီကိုတရုတ်နိုင်ငံ၏စူပါပစ်မှတ် 1000 ကီလိုမီတာမှာရှိတဲ့မြန်နှုန်းရထား | Maglev 30 / 11 / 2012 တစ်နာရီကိုတရုတ်နိုင်ငံ၏စူပါပစ်မှတ် 1000 ကီလိုမီတာမှာရှိတဲ့မြန်နှုန်းရထား | ယင်းအစဉ်အဆက်ကြီးထွားလာတရုတ်စီးပွားရေးအတွက် Maglev မြန်နှုန်းမြင့်ရထားကအလွန်အလေးအနက်ထားသည်။ တိုင်းပြည်အတွက်ပိုမိုကြီးမားကွန်ယက်ကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏အစီအစဉ်ကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်ကီလိုမီတာအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူအခြားရွေးချယ်စရာနည်းပညာများတစ်ခုဖြစ်သည် 2020 1000 နှစ်အရှိန်မြှင့်။ နှစ်စဉ်ကုမ္ပဏီပိုပြီးလျှပ်စစ်ဒါမှမဟုတ် hybrid မော်ဒယ်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဈေးကွက်ထဲမှာဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ပြဿနာများအဖြစ်ကောင်းစွာမော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လျှပ်စစ်မီးနှင့်အတူဖြေရှင်းမရနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောအသွားအလာနှင့်မြန်နှုန်းကန့်သတ်သည်။ ထို့ကြောင့်အလျင်အမြန်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးခေါက်နိုင်သောနိုင်ငံများဖွံ့ဖြိုးဆဲထည့်သွင်းရထားလမ်းအသွားအလာမှလှည့် ... ။
တရုတ်, 600 အဆိုပါပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ရှေ့ပြေးပုံစံ Make မှတစ်နာရီလျှင်မြန်နှုန်း Maglev Train ကီလိုမီတာ 23 / 05 / 2019 တရုတ်, တစ်နာရီကို 600 ကီလိုမီတာလျင်မြန်စွာတစ် Maglev ရထားများ၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုပွဲထုတ်မိတ်ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်။ Maglev ရထားသံလိုက် levitation အင်အားသုံးပြီးသံလမ်းထိမပါဘဲပြေးဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ တရုတ်ဗဟိုရုပ်မြင်သံကြား (CCTV), ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့Çingdaoမြို့ 600 ပေါ်တွင်မူတည်သည်တစ်နာရီလျှင် Maglev ရထားလမ်းကြောင်းအသင်းတော်ကိုလိုင်းများ၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုပြသပါလိမ့်မယ်ကီလိုမီတာ။ တရုတ်အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီတရုတ်မီးရထား Rolling စတော့အိတ်ကော်ပိုရေးရှင်းစီမံကိန်း (CRRC) Çingdao Sifang Co. , ဖွံ့ဖြိုး လက်ထောက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကုမ္ပဏီ Ding Sansan အဓိကနည်းပညာ၏ရှေ့ပြေးပုံစံ engineer နှင့်ရထားလမ်းစနစ်၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအလိုတော်၏အရေးကြီးသောနည်းပညာ components နဲ့မြန်နှုန်းမြင့် Maglev စမ်းသပ်ပြီးနိုင်ပါသည်။ ရှေ့ပြေးပုံစံအင်ဂျင်နီယာအကျင့်ကိုကျင့်ဘို့ '' static သည် START ကိုဖန်ဆင်း '' နည်းပညာဆိုင်ရာမြေပြင် ...
တစ်နာရီမြန်နှုန်းရထားနှုန်း 1000 ကီလိုမီတာပြုပါ 19 / 06 / 2012 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လယ်ပြင်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏အောင်မြင်မှုများကိုကြီးစွာသောအရှိန်အဟုန်မှာဆက်လက်။ တရုတ်မီးရထားအင်ဂျင်နီယာများအသစ်တစ်ခုရည်မှန်းချက်လျင်မြန်စွာတစ်နာရီလျှင် 1000 ကီလိုမီတာသို့ သွား. ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံးတိုင်းပြည်, တရုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများကိုကျော်လွှားဖို့ရထားလမ်းများတွင်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာပမာဏလျှပ်စစ်စွမ်းအားရထား, စျေးနှုန်းတိုး၏အရေးပါမှုလျော့ကျပင်ကြီးမြတ်တော်မူ၏။ တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီအသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူနိုင်ငံအတွင်းရထားလမ်းအားဖြင့်တရုတ်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, လုံးဝကိုပြောင်းလဲအင်ဂျင်နီယာချဉ်းကပ်မှု၏ပူးတွဲအကယ်ဒမီပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သတင်းစာဘေဂျင်း Times သတင်းစာအတွက်အစီရင်ခံစာများအဆိုအရတရုတ်အင်ဂျင်နီယာများတစ်နာရီလျှင် 1000 ကီလိုမီတာသွားနိုင်ပါတယ်ရထားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြမည်နည်း ရထား ...
Samra ရဲ့အသစ်ရထားဝန်ဆောင်မှုအကွာအဝေးဝင်ပါလိမ့်မယ် 17 / 10 / 2013 Samra ရဲ့အသစ်ရထားဝန်ဆောင်မှုအကွာအဝေးဝင်ပါလိမ့်မယ်: ယနေ့ 20103အတွက်လုပ်ဆောင်ကြောင်း Samsun အလင်းရထားလမ်းစနစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ စုစုပေါင်းစနစ်347 သန်းခရီးသည်တစ်နှစ်လောက်။ စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ဝန်ဆောင်မှုသို့ entry ကို၏ Samsun အလင်းရထားစနစ် 110 အားဖြင့် operated 16 28 လမ်းရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားနှင့် Samsun ပို့ဆောင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း (SAMULAŞ) ကထောက်ခံခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3ယူရိုသန်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်တာဇော်မွှားပန်းဤအရပ်မှသမ္မတနိုင်ငံရင်ပြင်ဘူတာများတွင်နိုင်ငံသားများမှဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ လေးညှင်းပွင့မှာလည်းဖြန့်ဖြူးထဲမှာ, လေ့လာရေးခရီး၏ဘူတာရုံ Samsun မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံမှ 47 သန်းခရီးသည် Arla အားဖြင့်ပန်းပွင့်ပေးထားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ347 IN NEW Training နှစ်ပေါင်းသန်း ...
နှစ်သစ်ကူးအတွက် Gaziantep လေဆိပ် Teminal အဆောက်အအုံ 2020 စတင်ပါလိမ့်မည် 30 / 12 / 2018 လာရောက်လည်ပတ်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ဆက်တိုက်လုပ် Gaziantep ထံမှပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan, Gaziantep လေဆိပ်တာမီနယ်၏ချဲ့ထွင်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအလုပ်နှင့်အာဏာပိုင်များ၏သစ်ကို terminal ကိုအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေး site ကိုဆန်းစစ်နေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Turhan, Gaziantep လေဆိပ်ယခုနှစ်သစ်ကို terminal ကိုအဆောက်အဦး၏ 2020 ဖွင့်လှစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ဝင်များမှထုတ်ပြန်ချက်များအတွက်လေ့လာမှုကဆိုသည်။ "Gaziantep ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှရသောလေဆိပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆိပ်ကမ်းတိုးချဲ့နေကြသည်ခရီးသည် Gaziantep ပြီးနောက် Diyarbakir အဆိုပါလေဆိပ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနှင့်တိုက်ရိုက် terminal ကိုလေယာဉ်ပေါ်တက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုရပါလိမ့်မယ်။6ဖဲ့ဖိုစနစ်နောက်ဆုံးထို့အပြင် hosting အတွက် ...
တစ်နာရီကိုတရုတ်နိုင်ငံ၏စူပါပစ်မှတ် 1000 ကီလိုမီတာမှာရှိတဲ့မြန်နှုန်းရထား | Maglev
တရုတ်, 600 အဆိုပါပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ရှေ့ပြေးပုံစံ Make မှတစ်နာရီလျှင်မြန်နှုန်း Maglev Train ကီလိုမီတာ
တစ်နာရီမြန်နှုန်းရထားနှုန်း 1000 ကီလိုမီတာပြုပါ
နှစ်သစ်ကူးအတွက် Gaziantep လေဆိပ် Teminal အဆောက်အအုံ 2020 စတင်ပါလိမ့်မည်
တူရကီ Nigde အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှစ်တွင်စတင်ပါလိမ့်မည် 2020
Kayseri မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်း 2020 အတွက်ပြန်တမ်းပါလိမ့်မည်
အဆိုပါဓါတ်ရထားတန်ချိန်ကြှနျုပျတို့ကိုသုံးတဲ့အခါအမျိုးသမီးများ 70 ပိုပြီးသတိထား whatman